Shiinaha Aragti Weyn Qaybo culus oo bir ah Alxanka alxamida shirkii soosaarayaasha birta caadada iyo alaableyda | THYH
Aragti Weyn Qaybo bir ah oo alxamid ah oo alxamid ah shirkado been abuur ah
Magaca Badeecada Aragti Weyn Qaybo bir ah oo alxamid ah oo alxamid ah shirkado been abuur ah
Waxyaabaha birta / birta khafiifka / birta galvanized / Aluminium / aluminium titanium.
CodsigaShirkadda Mashiinnada, Aerospace, Gawaarida, Metallurgy, Gaadiidka TareenkaNew Energy, Shipbuilding, Petrochemical, Dhismaha
Waxaan siinnaa adeegyo ballaaran oo adeegyo been abuur ah oo macmiil ah macaamiisha adduunka oo idil. Kaliya kuma shaqeyno dhammaan biraha caadiga ah, sida birta kaarboonka, birta birta ah, aluminium iyo aluminium naxaas ah, laakiin sidoo kale biraha dhifka ah sida nikkel-ka iyo aluminiumda la yiraahdo Warshadaha Mashiinka, Aerospace, Gawaarida, Metallurgy, Gaadiidka Tareenka, Tamarta Cusub, Dhisida Maraakiibta, Petrochemical iyo Dhismaha ayaa ah goobihii aan horey uga soo shaqeynay. Si kastaba ha noqotee, waxaan u furannahay caqabado cusub oo aan ku koobnayn warshadaha kor ku xusan.
Biraha sida birta kaarboon, birta birta ah, aluminium iyo macdanta naxaasku waxay ku dhacaan qaybtayada shaqada guud ahaan, laakiin waxaan sidoo kale la macaamili karnaa biraha dhifka ah sida nikeellada iyo aaladda titanium.
Ping La Qabsashada
Ching Is xoqid
Awood wax soo saarka:
goynta leysarka: cabirka ugu weyn 2700X3500, dhumucdiisuna waa 25mm
goynta plasma: cabirka ugu weyn 2500X3200, dhumucdiisuna waa 70mm
goynta tooshka: cabirka ugu weyn 18000X5000, dhumucda ugu badan 300mm
joojinta saxaafadda: dhererka ugu badan 15000mm, dhumucdiisuna waa 100mm
saxan duub: max ballaca ugu badan 4100mm, dhumucdiisuna tahay 200mm
mishiinka: cabirka ugu weyn 46000X8000X7000
1) Khibrad u leh birta sanado badan una adeegtay macaamiisha adduunka oo idil.
2) In kabadan 80 shaqaale xirfadlayaal ah oo howlkar ah ayaa kusii daba jooga xirfad cajiib ah.
3) Qalab heer caalami ah oo heer sare ah sida CNC, lathes tiro, qalabka alxanka,
CMM oo soo saar & baaritaanka qalabka aan u isticmaalnay si aan u hubino tayada wax soo saarkeena.
4) Adeegga OEM, waxaad dalbataa waa nala raacdeeyay.
5) xakamaynta tayada ISO
2. Maxaad ku fiicantahay?
Amarka aan caadiga ahayn (dhammaan noocyada been-abuurka birta ah ee leh dhammaan noocyada daaweynta dusha sare) & alaabada birta / aluminium / titanium alloys leh soo saar wanaagsan.
3. Waa maxay faa'iidooyinkaagu?
Tayo sare leh & warshad sheet bir toosan iyo shaqooyinka biraha culus, Adigu waad naqshadeysaa, waan dhisnaa, sawirkaaga / muunaddaada / sawirkaaga ayaa si weyn loo qadarin doonaa.
4. Muunad kasta oo la heli karo?
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno muunadda.
5. Alaab kasta oo taallay keyd?
Badanaa waxaan alaab ka sameysanaa amarka ka dib. Amarada badankood waa la habeeyay.
6. Maxaa qiimaha aad ku calaamadeysay aad ugu jaban?
Xakamaynta kharashka adag, alaabta ceeriin ee tooska ah. Waxaan nahay soo saaraha ku habboon been abuur bir sheet, qiimaha ku kala duwan yihiin wax, cabbir, dusha sare daaweynta, gaarsiinta iyo iwm arrimaha. Qiimaha ugu dambeeya wuxuu kuxiranyahay shuruudaha.
Hore: Qaybo ka sameysan warqad khaas ah oo ka sameysan warshad xirfadeed.
Daabacaadda Birta Xaashida
Ahama Steel ahama Birta Been